Daawo muuqaalka:Maamulka Gobolka Hiiraan oo kulan yeeshay |
Daawo muuqaalka:Maamulka Gobolka Hiiraan oo kulan yeeshay
Maamulka cusub ee gobolka Hiiraan oo shalay xilka si rasmi ah ula wareegay ayaa maanta kulan koodii ugu horeeyay kuyeeshay magaalada Baladweyne ayaa dadka ka dalbaday in ay lashaqeeyaan.
Kulankan ay maanta yeesheen mas’uuliyiinta maamulka cusub ay dowladda Soomaaliya u magacaaday gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlayay sidii loo amba qaadi lahaa howlaha loo igmada iyo sidii ay ula shaqeyn lahayeen shacabka.
Markii uu soo gaba gaboobay kulanka ayaa waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo waxa uuna sheegay mas’uuliyad weyn ay ka saran tahay wax ka qabashada xaalada gobolka iyaga oo fulinayo dardaaranka mas’uuliyiinta dalka.
Sidoo kale guddoomiyaha ayaa ugu baaqay shacabka gobolka in ay ka shaqeeyaan dib u dhiska gobolka si uu u noqdo mid ay ka muuqato bilic.
Dhanka kale taliyaha ciidanka dowladda Jabuuti ee Hiil-walaal ayaa u hambalyeeyay guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan waxa uuna sidoo kale sheegay in ay si wanaagsan ula shaqeyn doonaan hoggaanka cusub ee loo magacaabay gobolka.
Shalay ayey aheyd markii munaasabad ay xilka kula kala wareegayeen maamulka cusub ee gobolka hiiraan loo magacaabay iyo kii hore waxaana munaasabada xil wareejinta ka qeyb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda.